Fartiin degniin ah oo ku socota dadweynaha - Radio Sweden Somali - Raadiyaha Iswiidhen | Sveriges Radio
Fartiin degniin ah oo ku socota dadweynaha
La daabacay torsdag 16 augusti 2012 kl 17.23
Hay,ada läkaremedelsverket waxay ka digaysaa qaadashada dawoda antibiotikade Spektramox qaybteeda sharoobada 50 mg/m+12.5 mg/ml oo batch nambarkeedo yahay 96625. Läkemedelsverket ayaa warsaxaafaded ku soo saartay in aan laqaadan dawodadaas.
Sababta ayaa lagu sheegay in laga helay caag jajab ah sharoobada Spektramox, waxanaa loogu baaqayaa bukaanka loo qoray dawadaas todobadii bari ee ugu danbeysay in ay sida ugu dhaqsaha badan u tagaan farmashiyaha apoteket oo ay iska badalaan dawada.
Sharoobada caaga laga helaa ayaa numberkeedo yahay 96625 Spektramox gaar ahaan mid caruurta loo qoro.
Dawadaan inta la soo saaray waxay ka koobantahay 70 000 oo baakad, 6000 oo kamid ahna waxaa lagu gaday dalka Sweden. Caaga ayaa dawda ka soo raacay qalabkii lagu farsamaynayey. Madaama ay jirto qatar ah noocyada kala gadisan ee dawada caad ku jira ayaa loogu dhaqaaqay in ay bukaanado iyo farmashiyaasho soo celiyaan.
Hadaba hadii todobadii maalmood ee ugu danbeysay dawadaas laguu qoray u gee apoteka si lagaaga badalo
Warbixinta ku sabsan dignintaan ka aqriso boga läkemedelsverket.